[Xog:]Sawiro Ninkii Sawiradda ku xaday Madaxweyne Garguurte oo noqday Majeerteen u shaqeeya Mareykanka ? - iftineducation.com
[Xog:]Sawiro Ninkii Sawiradda ku xaday Madaxweyne Garguurte oo noqday Majeerteen u shaqeeya Mareykanka ?
iftineducation.com – Baaris Warbaahinta Waagacusub sameeysay ayaa lagu xaqiijiyay in ninkii gaarigga ku waday Madaxweyne Garguurte ee sawiradda ka qaaday isagoo hurdaa lagu magacaabo Faysal Xasan una dhashay beesha Majeerteen.
Ninkaan oo ka tegay Dalka Mareykanka ayaa ka mida Somali u shaqeeysa Ciidanka Mareykanka ee taliska Balidoogle hasse yeeshee wuxuu ku kacay qaladkii ugu xumaay ee qof Madaxweyne lagu aaminay ku dhiiraday taariikhda.
Xasan Faarax ayey Mareykanka u xilsaareen inuu gaari weyn oo Bus ah ku qaado Madaxweyne Garguurte laakiin wuxuu awooday inuu gaarigga shil la geliyo ama la baxsado maadama uu ahaay nuuca aan xabadda karin .
Saraakiisha Villa Somalia oo aan ninka aqoon u laheyn ayaa Waagacusub ugu faanay iney xireen laakiin lama hubo.
Sikastaba ha ahaatee, waxaan helnay sawiro muujinaya Xasan Faarax oo qol fool xumo badan dhex jiifa isagoo ay ag yaalaan gasacyo u eg kuwa Khamriga .
Gabadh Guurdoon yurub ku nool aheed iyo gabagabada guurka Nin ku noolaa Afrika Daawo
Hababka Ugu Qatarsan Ee Leys-kugu Galmoodo hada kacsi dhawdahay ha aqrin